Maxamed siduu sidaas u ahaa ayuu billaabay inuu isagu su’aalo isweydiiyo oo uu weliba Hooyo, Xaliimo weydiiyo su’aalaha qaar. Sua’aalaha ugu badanaana isagaaaba isweydiin jiray oo waxa uu dhihi jiray: “Aaway Aabahey? Mar kasta oo aan hooyo weydiiyo aaway aabo, waxa ay I leedahay waxa uu jiraa shaqo. Xalay ma arag, maanta inaan arkaayana u malayn maayo. Hooyaa Iskuulka I geysa, dugsiga Quraanka I geysa, banooniga I geysa, isbitaalka I geysa, oo weliba maalin kasta raashin ii sameysa”. Mararka kaliya uu Maxamed aabo fursad ku helana waxaaba aabihii ugu jawaabaa isagoo degdegsan “Aabo su’aalo badanidaa!, orodoo hooyadaa u tag oo weydii waxa aad rabto anigu waa daahsanahay oo meel baan u degdegayaa” marka uu hooyadii la hadlana waxa uu helaa isla jawaabtii uu heli jiray.
Maxamed waxa uu billaabay inuu dhibsado gurigii oo uu weliba hooyadii ku soo afceliyo oo waxa uu rabo hadduu waayo qeyliyo. Hooyo Xaliimo oo wiilka curadkeeda ah aad u jecelna waxa ay billowday si ay u raali geliso inuu wax kasta uu raboodo u sameyso oo ay ka ilaaliso wax kasta oo ka xanaajiya. Mararka qaar, marka ay wiilka u adkeysan weydo Hooyo Xaliimo, waxa ay istiraahdaa aabihii Xassan u sheeg oo marka ay hadalkiisa billowdo ayuu Xassan yiraahdaa, “mar kasta oo aan guriga soo galo wiilkaan ayaad sheekadiisa iyo dhib aanan jirin ka sheekeysaa”. Wiilka adaa dhalay shalayna waa heysan jirtay ee maxaa isbedelay? Walaalow Xassanow, wiilku wiilkii hore ma aha. Maamil walba iskuulkii waa laga soo dacwoodaa, dagaal iyo dhib ayuu billaabay. Kubaddii aan geyn jiray wuu I diiday oo waxa uu leeyahay ima raaceysid, haddii kale ma aadaayo. Kuma deyn karo wadada, ina adeerow wiilkaan waqti u hel. Aabo Xassan, aniga ayaa wiilka la hadlaya ayuu warkiisa ku soo dhameeyaa halkii hore ayuuna howshiisa ka wadaa isagoo mar walba yiraahda anigaa wax ka qaban doona hadana waxba ka qaban.
Hooyo Xaliimo iyo Maxamed xaaladdii ay ku jireen ayey ku dhameysteen sanadkii todobaad ee dugsiga sare, waxaana la galay fasax dheer. Reerku sanadkaas meelna ma qorsheysan inay aadan oo sanadihii hore wey dhoofdhoofi jireen sababo dhaqaale darteen, waxaana la isku arkay gurigii maalin kasta iyadoo aabuhu badanaa gurigii ka maqan yahay. Maxamed, marka uu soo kaco ayuu billaabaa inuu hooyadii ku billaabo amaba uu weydiiyo inuu bixi karo oo uu bannaanka ku soo ciyaari karo. Marka ay hooyadii u diidana waxa uu sameeyaa wax kasta oo ay hooyadii ugu ogolaan karto inuu baxo, waxa uuna badana sameeyaa inuu ilmaha ka yar yar ka demiyo taleefishinka wax ay ku cayaarayaan ka qaado iyo wax kasta oo uu hooyo ku dareensiin karo inuusan rabin inuu guriga joogo. Marka ay hooyo Xaliimo ku daasho celcelintiisana waxa ay u dirtaa bannaanka oo uu halkaas ka raacaa ilmo ka waaweyn oo iyagu deysanayaal ah si fiicanna looga yaqaan xaafadda. Waxa ay ku tiraahdaa oo kaliya hooyo iska jir ilmaha aad raaceyso iyo waxa ay sameynayaan soona noqo wax badan ha maqnaanin, dugsi ama banooni ayaad galabta leedahay.
Hooyo Xaliimo, waxa ay arintii u sheegtay Maxamed aabihii Xassan, oo isagu weli aanan wax badan ka warheynin waxa uu Maxamed sameeyo. Marki maxamed hooyadii u sheegtay aabihii inuu subax kasta baxo Maxamed oo uu raaco ilmo ka waaweyn oo aysan garaneynin waxa uu sameeyo, ayuu maxamed aabihii billaabay inuu Xaliimo ku eedeeyo oo uu yiraahdo, waxa uu wiilkaas la yimaado adiga ayaa ka masuul ah. Wax kasta oo uu rabo ayaad u sameysaa, ma tihid hooyo ilmaheeda ka adag. Ma howshi gurgaan kula qabtaa ayuu hadalkii Xassan ku soo dhameeyay. Hooyo Xaliimo oo yaaban ayaa iyaduna hadalkii ku soo dhameysan anigu waan celin waayay ee wiilkaada waqti u heloo jidka ka cesho, haddii kale waxa uu keeno hadhow yaanan la isweydiinin.
Akhriso Qeybta Labaad.
« Qof Soomaali ah oo hadana jinsiyad kale heysta, madax heerkee ah ayey tahay inay ka noqdaan dalka Soomaaliya?